मौका पाए मिथिलाका कलाकार जे पनि गर्न सक्ने | bhumionline
मौका पाए मिथिलाका कलाकार जे पनि गर्न सक्ने
Posted By: bhumionline Nov 9, 2015
जितेन्द्र के.सी. मैथिली र भोजपुरी फिल्मी क्षेत्रका चिरपरिचित नाम हो । जिवनको ४२ औ बसन्त पार गरिसकेको जितेन्द्रले दर्जनौ मैथिली,भोजपुरी र हिन्दी फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन । मार्सल आर्ट,नृत्य,अभिनयमा विशेष दखल राख्ने उनी मौका पाए मिथिलाका कलाकारले जस्तो सुकै अभिनय र क्षेत्रमा सफलता पाउन सक्ने बताउछन । प्रस्तुत छ उहासंग भएको कुराकानीको संपादित अंश
प्रश्न ः जितेन्द्र जि तपाईको पारिवारिक पृष्टभुमि वारे जानकारी पाउन
उत्तर ः म साधारण परिवारमा जन्मेको हु । १० कक्षामा पढदै गर्दा कलाक्षेत्रमा रुची भयो र पढाई छोडी यतै लागे । आमा वुवा वितिस
क्नु भो । अहिले परिवारमा श्रीमति २ छोरी र एउटा छोरा छ । जेठी छोरीको विहे भैसकेको छ भने अर्की छोरी १२ मा र छोरा ९ मा अध्ययनरत छ ।
प्रश्न ः कला क्षेत्रमा रुची कसरी भो ?
उत्तर ः वुवा पनि आफ्नो समयमा कलाकार हुनुहुन्थ्यो र सायद उहाकै छाप परेर होला म पनि यसैमा लागे ।
प्रश्न ः अभिनय बाहेक अरु के के गर्नु हुन्छ ?
उत्तर ः सवभन्दा पहिले त म मार्शल आर्टको ट्रेनर नै थिए पछि नृत्यमा आकर्षण बढयो सोही क्रममा आर्ट अफ कल्चरबाट कदर पत्र समेत पाएको छु । यस क्षेत्रको वाहेक म करिब २५ वर्ष देखि जलेश्वर स्थित विजय फर्निचरमा म्यानेजर छु ।
प्रश्न ः अहिले सम्म कतिवटा फिल्ममा अभिनय गरिसक्नु भएको छ ?
उत्तर ः ठयाक्कै अहिले याद त छैन तर मैथिली,भोजपुरी र हिन्दी मिलाएर दर्जनौ होला । जसमध्ये मैथिली मिल्म प्रितम र ममताले निक्कै ख्याती कमायो । अन्य फिल्महरुमा हमरा लग रहव , मित हमर,मिथिला के योद्धा,प्यार अइसन रोग वा,मोहव्वत एक जंग,लडाई,अपनी ताकत जिन्दावाद,मुखिया जि के लव स्टोरी लगायतका छन ।
प्रश्न ः कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
उत्तर ः सन्तुष्ट छु । पहिले पहिले मिहिनेतको हिसावले ज्यादै न्युन पैसा भएपनि अचेल त्यसतो समस्या छैन । कुनै समय थियो जव मैले अभिनय गर्दा दैनिक ज्यालादारीका हिसावले पैसा पाउथे ।
प्रश्न ः मिथिलामा कलाकार र कलाको के अवस्था छ ।
उत्तरः मिथिलाका कलाकार उतकृष्ट भएपनि पर्याप्त मौका पाउन सकेका छैनन । उनमा भएका कलालाई झन निखार्न मौकाको खाचो छ । फिल्म र म्युजिक भिडियोमा लगानीकर्ताहरु देशको परिस्थितिका कारण लगानी लगाउन डराउछन । त्यही भएर यस क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न अहिलेको आवश्यक्ता छ ।
प्रश्न ः कस्तो खाले अभिनय गर्नु मन लाग्छ ?
उत्तरः मैले धेरै किसिमको अभिनय गरे जसमध्ये खलनायकको रोल गर्दा म असाध्यै खुसी हुन्छु । नायक भन्दा खलनायक बन्न गार्हो छ त्यही भएर पनि मलाई खलनायकको अभिनय मनपर्छ ।
प्रश्न ः नया कलाकारलाई के भन्नु हुन्छ ?
उत्तर ः नया कलाकारहरु मिहिनेती छन हाम्रो समय भन्दा अहिले प्रतिश्पर्धा बढेको छ त्यही भएर समय र मौका दुवैसंग मिलेर चल्नुस सफलता अवश्य मिल्नेछ ।
हाम्रो पत्रिकाको लागि समय दिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद जितेन्द्रजी
Be the first to comment on "मौका पाए मिथिलाका कलाकार जे पनि गर्न सक्ने"